Fanonganam-panjakana any Guinea: voasambotra ny filoha, rava ny governemanta, nakatona ny sisintany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Gineana » Fanonganam-panjakana any Guinea: voasambotra ny filoha, rava ny governemanta, nakatona ny sisintany
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Gineana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fantatra fa ny filohan'ny mpikomy - Mamadi Dumbouya - dia efa nanompo tao amin'ny Legiona vahiny frantsay.
Fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tany Guinea.
Ny filoha Guinea dia nosamborin'ny mpikomy miaramila.
Nanambara ny fanakatonana tanteraka ny sisintanin'i Ginea ny mpitarika ny mpanongam-panjakana.
Ny kolonely Mamadi Dumbouya, izay niaraka tamin'ny mpanohana azy dia nanao fanonganam-panjakana tany Guinea ary naka fahefana, dia nanapa-kevitra ny handrava ny governemanta, hanafoana ny lalàm-panorenana ankehitriny ary hanidy ny sisintany misy ny rivotra sy ny firenena.
Dumbouya dia nandrakitra hafatra an-tsary izay nanambaràny ny fikasany taorian'ny fakana fahefana tany Ginea.
Tsy mazava ny niafaran'ny filoham-pirenena ginea Alpha Condé taorian'ny horonantsary tsy voamarina nampiseho azy teny am-pelatanan'ny miaramila, izay nilaza fa naka fahefana izy ireo.
Ny filoha Condé dia voafidy indray amin'ny fe-potoana fahatelo mampiady hevitra eo amin'ny toerany nandritra ny fihetsiketsehana mahery setra tamin'ny herintaona.